Terms & Conditions | Sand Pebble Tours
TORGETS & FITSABOANA FOTSINY
Ny tahan'ny rehetra dia amin'ny Indian Rupee.
GST 5% azo ampiharina amin'ny totalin'ny volavolan-dalàna.
Ny vahiny dia nangatahana mba hahazoana ilay fiara manara-maso ny tenany alohan'ny fampiasana azy. Izy ireo koa dia nangatahina mba hitazona ny fananany manokana amin'ny toerany manokana. Tsy tokony hamela andraikitra amin'ny fahaverezana isika.
Raha toa ny karazana fiara arakaraky ny fangatahana dia tsy azo omena noho ny antony tsy ampoizina, ny karazana fiara mitovy amin'izany dia homena ny vahiny.
Ny fahitana fahitana dia mitovy amin'ny làlam-panafahana amin'ny alàlan'ny làlam-by ihany.
Ny mpamily dia mety tsy voatery mizara haingana kokoa noho ny fepetra voalaza ao amin'ny Indian Motor Vehicle Act.Guest dia nangatahana ny tsy handehanana ny fiarandalamby amin'ny alina.
Ho an'ny tombontsoan'ny Guests, ny Sand Pebbles Tours dia handamina handoavana saram-pandraharahana momba ny fandoavam-bola sy famotsoran-keloka ary famindram-pahefana eo anelanelan'ny fanjakana izay havian'ny vola avy amin'ny Guest ho an'ny mpamily amin'ny famokarana Receipt amin'ny faran'ny andraikitra.
Ho an'ny andraikitra eo an-toerana, ny takarivan'ny Night Chauffeur dia hoentina eo anelanelan'ny 22.00 Hrs ka hatramin'ny 06.00 Hrs. Ireo fiampangana hafa rehetra dia omena azy amin'ny vola mandritra ny fampiasana azy.
Raha mandeha fiarandalamby ao Ghat, ny Air Conditioning dia hijanona.
Mba hisorohana ny fifamoivoizana amin'ny fifamoivoizana sy ny toe-javatra hafa tsy ampoizina, izay mety hahatonga ny faharetana, dia omena alalana mialoha ny fampidiran-draharaha amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny taratasy fanasana dia asaina nosoniavin'ny mpampiasa mba hanamarina ny fampiasana azy. Ny fitarainana manaraka dia tsy miaina.
Ny vahiny dia angatahina mba hamantatra ny kalitao sy ny fahombiazantsika ary hameno ny endrika "Feedback" izay omen'ny Chauffeur azy ireo, Izany dia hanampy antsika hanompo bebe kokoa anareo.
Ny faktiora dia hatsangana amin'ny Client / Guest raha tsy misy fanamarihana manokana. Ny fomba fandoavam-bola dia tsy maintsy ambara mazava tsara amin'ny fotoana famandrihana.
Ny volavolan-dalàna dia haseho amin'ny faha-40 taonany. Sand Pebbles mamela ny karama farany ambany indrindra amin'ny 15 androany amin'ny daty handoavana ny Bill momba ny fampiharana ny fifanarahana. Ho an'ny fanitarana ny Time Stone Sand Kebay dia azo angatahana an-tsoratra farafaharatsiny ao anatin'ny ora 48 amin'ny fandraisana ny volavolan-dalàna.
Ny Tariffs voalaza etsy ambony dia miankina amin'ny fitovian-jo mifanohitra amin'ny toe-javatra misy ny fandaniana amin'ny vidin'ny solika na govt. Teti-bola.
Ny famaranana ny fiara ao Bhubaneswar dia tanteraka araka ny fahendren'ny Sand Pebbles.
Ny fandoavam-bola dia azo zaraina amin'ny vola na amin'ny mpandoa hetra / DD / PO voasintona ho an'ny "Sand Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd."Ny fandoavam-bola dia azo ekena amin'ny Credit Card / RTGS na NEFT (Ny karaman'ny bola amin'ny carte de crédit dia hoentina 3% fanampiny).
Ho an'ny fametrahana amin'ny alalan'ny karatra Kredity, ny Card No. and Expiry Date dia alefa alefa / Faxed amin'ny fotoan'ny Booking. Raha toa tsy voafafa ny fidirana dia mila mamerina amin'ny vola ny mpanjifany / Guest.
Raha toa ny fandoavam-bola natomboky ny RTGS / NEFT, ny Sand Pebbles dia tsy maintsy havarina amin'ny antsipiriany.
Raha misy fametrahana vola amin'ny Rs.25000.- na mihoatra, kopia ny karatra PAN an'ny Client / Guest mba homena.
Ny fifandirana rehetra dia miankina amin'ny fahefam-pitsarana ao Bhubaneswar.